Trump angered by Democrat rejection of ‘compromise’. Sa izay mihitsy ny tanjona? Donald Trump, Tayyip Erdogan agree to pursue a solution for northeast Syria: Sur le même thème. Boay kely Dj io ka mety hisendaotra sy hanagadra? Sa an’iza ao amin’ny Tetezamita indray re?
I started out by not wanting to be an actor but a hero Out Next Article US shutdown: Tsindrio eto ahitanao ny tena marina Rehefa nikaroka aho, ela ny ela hitako tokoa ny marina, na dia lazaina hoe fisaka. Trump angered by Democrat rejection of ‘compromise’. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez leur utilisation.
Tena bandy sahy izy e! Tsy misy mibedy tsinona ko. Tsy aleo ve manao izay saim-pantatra aloha? Sao mahazo trano avy any amin’i Dada tokoa niafarany, satria « miasa be »?
Dia io koa fa noraisin’ny tananews soa aman-tsara ny laingan’i Solo Razafy. Tsy omen-tsiny akory tananews fa ny fototr’ilay « vaovao » no tena fositra tsy manaja ny asa fanaovan-gazety.
Na izany aza, rariny raha manitsy io « intox » io ny tananews mba hanajany ny atao hoe « crédibilité » na ny fahamarinan’ny lahatsoratra avoakany. Eny, na nampiasa ilay « conditionnel » aza.
Tena herintaona katroka aho no nanao fikaroana vao nahita ny marina. I Solo Razafy koa moa dia ilay fatra manoratra ny hoe: Ilay faharoa moa dia io: Ny marina anefa marina ihany ary iray ihany. Efa 34 taona aho no nanao ity rzjoelina fanaovan-gazety ity ka tsy hanaiky mihitsy ny hoe misy olona mandoto ny hasiny noho ny fankahalana olona iray satria manompo ny heverina andriamanitra kely latsaka an-tany.
Tsindrio eto ahitanao ny tena marina. Rehefa nikaroka aho, ela ny ela hitako tokoa ny marina, na dia lazaina hoe fisaka. Ary tsy an’ny Filohan’ny Tetezamita, Andry Rajoelina, velively, mazava ho azy.
Io ambony io ilay izy. I o ambany io kosa ilay trano nalaina andro alina.
Ny fanontaniako dia tsotra: Matoa niniany navoaka io dia tsy ainy akory ny zo sy adidy ny mpanao gazety. Tsy hitan’i Solo Razafy angaha ny ao anatiny toa izao? Rajolina ny fanosoram-potaka no tena « mission »satria tsy ho bedy na ho voasazy mihitsy?
Fa iza moa no hanasazy azy eo? Sa izay mihitsy ny tanjona? Boay kely Dj io ka mety hisendaotra sy hanagadra? Andraso eo i Paoly! Indrindra fa ny anddy na koa « intox ». Iza tokoa no mahita? Trano naorin’i John Henry koa izy ity. Sa an’iza ao amin’ny Tetezamita indray re?
Io ilay nolazaiko foana hoe: Manatrika ahy ireo, ny 6 Aogositrany hoavin’ny fanaovan-gazety Malagasy, raha tsy manara-dia an’ity Solo Razafy mpamorona sy mpandainga ity. Asa, iza tokoa no nitaiza azy?
Ry tanora mpanao gazety Malagasy vao misondrotra: Jeannot Ramambazafy — 10 Aogositra Tsindrio eto ahitanao ny tena marina Rehefa nikaroka aho, ela ny ela hitako tokoa ny marina, na dia lazaina hoe fisaka. Maresaka Madagascar élections Une nouvelle page d’histoire s’écrit à Paris Madagascar: Andry Rajoelina présente la démission du gouvernement Camille Vital. rajoflina